Ilaina: fiantohana ara-pahasalamana ho an'ireo mpitsidika ny Vondrona eropeana
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Andorra Travel News » Ilaina: fiantohana ara-pahasalamana ho an'ireo mpitsidika ny Vondrona eropeana
Enga anie 25, 2017
Olom-pirenena ve ianao amin'ny firenena izay takian'ny UE hanana visa hidirana? Ny visa dia takiana amin'ny olom-pirenena toa izany koa raha monina any amin'ny firenena toa an'i Etazonia na Kanada izy ireo. Moa ve ianao olom-pirenena amin'ny firenena any ivelan'i Eropa izay mikasa ny hanana fijanonana maharitra any Eropa noho ny asa na fialamboly?
Raha eny ny valinteninao dia tadidinao angamba i Obama Care na fikarakarana ara-pahasalamana ho an'ny rehetra. Any Eropa, tsy ny olom-pirenena ihany no mila fiantohana ara-pahasalamana, fa koa ny mpitsidika. Ny ankanavaka dia ny fitsidihana fotoana fohy avy amin'ny olom-pirenena izay afaka miditra ao amin'ny EU tsy misy visa. Mba hahafahan'ny kaonsily mamoaka visa manan-kery ho an'ny faritra Schengen, ilaina ny porofon'ny fandrakofana ara-pahasalamana.
Mba hahafahan'ny kaonsily ao amin'ny firenena eropeana mamoaka visa manan-kery ho an'ny faritra Schengen, ilaina ny porofon'ny fandrakofana ara-pahasalamana.
Inona no tokony ho fantatrao rehefa mividy fiantohana.
Ny fiantohana dia tsy maintsy manan-kery any amin'ny firenena EU sy Schengen rehetra
Ny fiantohana dia tsy maintsy manefa ny faharetan'ny fotoana ijanonanao manontolo, na dia mandalo fotsiny aza
Ny vola farafahakeliny ho an'ny fiantohanao dia tokony ho EIRP 30,000.00
Ny firenena eropeana rehetra dia manana lalàna nasionaly manokana koa tokony hojerena.
Ohatra, any Alemana, ny fiantoham-piainanao dia tsy maintsy manefa 100% amin'ny vidin'ny hopitaly rehetra, na eo aza ny fizotran'ny marary na nampidirina. Izany dia tsy maintsy ampidirina raha tsy maintsy ho hitan'ny manam-pahaizana manokana ianao. Ny vidin'ny paosy ho an'ny fiantohana rehetra dia tsy afaka mihoatra ny 5,000 Euro.
Raha tsy mila visa ianao amin'ny fidirana voalohany any amin'ny firenena halehanao dia mila manome porofo fiantohana farany ianao 31 andro taorian'ny nahatongavanao. Voaofana tsara ny manampahefana hanamarina izany. Tsy afa-mivoaka ny diplaomaty.
Mora sy haingana hividy fiantohana toy izany.
Manoro hevitra ireo manam-pahaizana ny hifandray amin'ny mpiantoka toy ny BDAE Gruppe, satria manana traikefa an-taonany amin'ity vondrona ity ity vondrona ity.
Misy dikany izany ary mety takiana ho an'ny olom-pirenena tsy EU mba hanomezana toky ihany koa ireo olona ao amin'ny fianakaviana. Amin'izao andro izao dia mety ho lafo be ny fikarakarana ara-pahasalamana.
Fitsidihana Expat fitsidihana, ohatra, dia manome fandrakofana feno amin'ny EUR 1.10 isan'andro fotsiny.
Fanazavana bebe kokoa momba Fiantohana ara-pahasalamana ho an'ny vahiny any Alemana .
Ny fizahan-tany any Hawaii dia manasa ny rehetra handray an'i Hokulea mody
Sekreteran'ny Tahirimbolam-panjakana Mnuchin: Etazonia mandinika ny fahazoan-dàlana Boeing sy Airbus hivarotra fiaramanidina amin'i Iran